Dabaal-deggii goosashada ee nimcada ka timaadda waqtigii jaahiliga | Safarka Absolut
U fidinta mahadnaq goosashada
Iidda goosashada waa dabbaaldeg ah gracias ku faafay adduunka oo dhan. Asalkeedu wuxuu ku laaban yahay wakhtigii bini aadamku wuxuu noqday fadhiid oo bilaabay barashada beeraha. Iyada oo uu la socdo, ayuu ugu mahadnaqay ilaahyadiisa in dhulku uu siiyey cunto.
Xidhiidhka sheeko xariirka ah ee ka dhexeeya Man iyo miraha Dabeecadda waxaa laga helaa nuxurka noocyadeenna waana ka gudubtaa aruurinta canshuurahaas dhulka iyo cuntada ay noo fidiyaan si aan ugu helno qiyaas diineed ama ugu yaraan suufinnimo.
1 Taariikh kooban oo ku saabsan iiddii goosashada
2 Bandhigga goosashada, dabaaldeg mahadnaq adduunka oo idil
2.1 Maalinta Thanksgiving
2.2 Erntedank, xafladda goosashada Jarmalka
2.3 Yuhuudii sukkot
2.4 Bandhigga Mid-Dayrta Shiinaha
Taariikh kooban oo ku saabsan iiddii goosashada
Masaaridii hore ayaa mahadceliyay Osiris oo ah midhaha ugu wanaagsan ee laga gurto, sida ku qoran xardhanaanta wakhtigaas. Caadadii ayaa loo dhaqaaqay Greece, halkaas oo xaflado lagu abaabulay si loo maamuuso Dionysus iyo ka dib si Roma, meeshuu dhacay ilaah in loogu yeero Bacchus. Xaqiiqdii, Latinosku waxay sidoo kale u dabaaldegeen xaflado kale oo goosashada sida Badarka, si loo mahadiyo Ceres badarka ay bixisay.
Inta lagu jiro Da 'dhexe dhaqankaas ayaa sii waday in lagu dhaqmo dadka reer miyiga ah. Si kastaba ha noqotee, waxay lumisay qayb ka mid ah ansaxnimadeeda. Sababta ayaa ah in beero badan oo beeraha ka mid ah lagu beeri jiray meelaha culimada ah oo wadaadada, sidaad fahmi doontid, aad looma siinin hadalo waawayn oo ciyaaro ah, inkasta oo ay mahadsanyihiin ilaahnimo miraha la helay.
Si kastaba ha noqotee, dhaqanku wuu sii jiray. Xitaa iyadoo imaatinka Renacimiento iyo iyada firfircoonaanta si weyn u xoojiyay. Weligeedna ma joogsan in looga dabaaldego mid kasta oo ka mid ah shucuubta adduunka illaa maanta. Haddii aad booqato tuulo kasta xilliga goosashada, waxaad arki doontaa sida ay ugu dabaaldegaan xilligaas qaab ay ugu mahadcelinayaan wax soo saarka la helay.
Dabaaldegga hadhuudhka ee Czech Republic
Bandhigga goosashada, dabaaldeg mahadnaq adduunka oo idil
Xaqiiqdii, qaar ka mid ah ciidaha ugu muhiimsan ee lagu xuso ummadaha kala duwan ee meeraheenna ayaa asal ahaan ka soo jeeda iidda goosashada. Tusaale ahaan Iran waa la dabaaldegaa mehgan, xaflad soo jireen ah oo soo jirtay wakhtiyadii hore Boqortooyadii Beershiya taasina waxay u dabaaldegaysaa imaatinka dayrta iyo beergooyska.
Dhinaceeda, ee Hindiya waxay leeyihiin xaflado sida Makara sankranti si looga mahadceliyo wixii laga soo helay dhulka. Laakiin ciidaha ugu caansan ee asal ahaan ka soo jeeda kuwa goosashada ayaa ah kuwa aan kuu sharixi doonno taasna, hubaal, waad ku baran doontaa.
Waa mid ka mid ah ciidaha qaran ee Mareykanka, Kanada iyo xitaa qaar Jasiiradaha Kareebiyaanka. In kasta oo aqoonyahannada oo dhami isku raacsan yihiin in asalkiisu ahaa dabaal degga goosashada, iyagu ma kala cadda bilowgiisa dhabta ah. Qaarkood waxay yiraahdaan waxaa laga qaatay xafladaha uu Isbaanishku abaabulay xilligan Florida Sababtaas awgeed, halka kuwo kalena ay tilmaamayaan in ay bilaabeen deggeneyaal Ingiriis ah qarnigii toddoba iyo tobnaad.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, sidaad horeyba u ogayd, khamiista afaraad ee Noofambar qoysaska dalalkaas waxay isugu soo ururaan miiska si ay ugu raaxaystaan ​​a turkey cufan oo duban inta lagu guda jiro casho ay weheliso buskud bocor Dalka Mareykanka waa fasax iyo silsilada dukaamada Macy ee abaabul a Dhoolatus weyn waddooyinka Manhattan. Sidoo kale, maalinta ku xigta, Mareykanku waxay bilaabaan xilliga dukaameysiga Kirismaska. Isagu ma yahay Black Friday.
Erntedank, xafladii goosashada Jarmalka
Sida laga soo xigtay folklorist Alois Doring, Mahadcelin Jarmal ah ama Erntedank Waxay ku leedahay asal ahaan ugu dhow dhaqankii Masiixiyiinta ee qadarinta dalagyada. Si kastaba ha noqotee, kuwa fog ayaa noo geyn doona isla Rome iyo Griiga, oo aan kuu sheegaynay.
Jarmalka kaniisadaha waxaa lagu qurxiyaa khudaarta, miraha, badarka iyo alaabada kale ee laga helo dhulka, iyo sidoo kale cuntada lagu diyaariyo iyaga, tusaale ahaan, rooti ama malab. Iyo suuqyada sidoo kale waxaa loo abaabulay si ay uga faa'iideystaan ​​dadka danta yar.
Waxay dhacdaa Axada ugu dambeysa bisha Sebtember ama kowda Oktoobar oo Jarmalku sidoo kale waxay u soo baxaan qoys ahaan si ay ugu dabaal degaan. Liiska ay ku raaxaystaan ​​waxaa sidoo kale ku jiri kara turkey ama hilib kale. Laakiin waxa caadiga ah waa in la qaato, si hufan, ah fuudka Erntedank, Cunto qafiif ah oo leh digir cagaaran, baradhada, kale, liq, karootada, basasha iyo doofaarka. Iyo, in la raaco, rooti qamadi ah iyo a kareemka bocorka leh xabadka.
El suqod qurxan
Reer Israel sidoo kale waxay leeyihiin iidooda goosashada. Isagu ma yahay Sukkot iyo sidoo kale waxaa loo sameeyaa in lagu xasuusto guulahooyinka reer binu Israa'iil ee safarkoodii kitaabiga ahaa ee ay ku mareen cidlada markii ay ka carareen Masar. Waxay dhacdaa inta udhaxeysa 15ka iyo 22ka Sebtember waxaana sidoo kale loo yaqaanaa Iiddii Waababka ama Qolladaha maxaa yeelay asal ahaan, waxaa lagu xasuustaa iyadoo dhowr maalmood lagu qaatay a sukka ama hoy kumeelgaar ah
Xaaladdan oo kale, in ka badan cunista, alaabtu waa barakaysan tahay. Wicitaanku ma yahay barakada afarta nooc, oo ay ku jiraan timirta, myrtle, liinta iyo safsarka. Waxaas oo dhan si loogu xuso mid ka mid ah xafladaha waaweyn ee diinta Yuhuudda.
Bandhigga Mid-Dayrta Shiinaha
Waa mid ka mid ah ciidaha ugu mihiimsan ee goynta adduunka maxaa yeelay marka lagu daro Shiinaha, waxaa sidoo kale lagu xusaa japanese, maxay ugu yeeraan Tsukimi; ah Kuuriyaan, yaa ugu yeera chuseok, iyo Vietnamese. Laakiin way ka sii muhiimsan tahay tan koowaad ee dalalkan, illaa heer loo tixgelin karo dabaaldeggeeda ugu habboon ka dib Sannadka Cusub.
Waxay dhacdaa maalinta shan iyo tobnaad ee bisha siddeedaad ee kalandarka Han, taas oo annaga ku jirta waa bisha Sebtember. Waxaa sidoo kale loo yaqaan Dayax Band maxaa yeelay boqoradii hore waxay caabudi jireen xiddigta si ay ugu mahadceliyaan goosashada. Xaqiiqdii, xitaa maanta qoysasku waxay isu yimaadaan si ay uga fikiraan dayaxa iyo xitaa u diyaariyaan waxa loogu yeero keega bisha. Intaa waxaa dheer, bandhigyo iyo hawlo kale ayaa dhaca.
Gabagabadii, xafladii goosashada, a mahadsanid dabaaldeg taasi waxay ka timaadaa waqtiyadii jaahilka, way sii socotaa oo si buuxda u shaqeynaya maanta, ama mahadnaq badeecada laga soo helay dhulka, ama dhaxal wanaagsan oo ka yimid awoowayaasheen.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Dabaal-degga goosashada oo ah dabaaldegyo nimcooyin ka yimid waqtiyadii jaahiliga